जनतासमाचार डट्कममा आज (शुक्रवार) प्रकाशित समाचारका मुख्य अंशहरू :
१.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध वृहत शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । राजधानीमा भएको शक्ति प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्ने अधिकाशं नेताले केपी ओलीको आलोचनामा समय खर्चिएका छन् । तर यस अघिका अन्य कार्यक्रमकाे तुलनामा नेताहरू केही नरम भएकाे देखिएकाे छ ।
२. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केपी शर्मा ओलीलाई मात्र दोष लगाएर आफूहरु चोखो नहुने बताउनुभएको छ । संसद विघटनविरुद्ध काठमाडौंमा आज दाहाल–नेपाल समूहले आयोजना गरेको विशाल शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले आजको अवस्था आउनुमा ओली मात्र दोषी नभएर आफूहरु पनि चोखो नरहेको बताउनुभएको हो ।
३.जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन परास्त गर्ने लडाईमा आफूहरु लागेको बताउनुभएको छ । राजविराजमा आज (शुक्रवार) आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले लोकतन्त्र र संघीयतामाथि नै प्रहार भएकाले यसको रक्षा गर्न अघि बढेको बताउनुभएको हो ।
४.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नझुक्ने बताउनुभएकाे छ । शुक्रवार राजधानीमा भएको जन प्रदर्शनलाई सम्बोधान गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई भष्माशुरकाे संज्ञा दिँदै नझुक्ने बताउनुभएकाे हाे ।
५.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतले संसद पुन:स्थापना गर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नेकपाले आज राजधानीमा गरेको बृहत शक्ति प्रदर्शनमा बोल्दै नेता खनालले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै संसद पुन:स्थापना गर्ने बताउनुभएको हो ।
६.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालले आफूहरुको पार्टी समानतामा आधारित हुने बताउनुभएको छ । नेकपाले राजधानीमा आज गरेको बृहत शक्ति प्रदर्शनको सभामा बोल्दै नेता भुसालले आफ्नो पार्टी अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म बराबर अधिकार भएको पार्टी बन्ने बताउनुभएको हो ।
७.बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सदनमा पेश भएको छ । पौडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव शुक्रबार दिउँसो बसेको प्रदेशसभा बैठकले सदनमा पेश गरेको हो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सांसद् अरुण नेपाललाई प्रस्ताव सदनमा पेश गर्न अनुमति दिनुभएको हो । गत पुस १० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल–माधव कुमार नेपाल पक्षका ४५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो ।
८.संसद विघटन गरेर सर्वत्र आलोचित ओली सरकारले फेरि अर्को स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना ३४ दिन पछाडि राजपत्रमा प्रकाशित गरेर ओली सरकारले आवश्यक पर्दा केसम्म गर्न सक्छ भन्ने पछिल्लो प्रमाण पेश गरेको छ । शुक्रवार बिहान महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा डाकिएको आपत्कालीन बैठकपश्चात त्यहीँबाट मुद्रण बिभागलाई निर्देशन दिएर राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गर्ने प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचनाको भाषासमेत टिपाई सूचना प्रकाशित गरिएको छ । वेवसाइटमा प्रकाशित सूचनाको मिति भने पुस पाँच गतेकै राखिएको छ ।
९. जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले निरंकुश चरित्र देखाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पतन निश्चित रहेको बताउनुभएको छ । राजविराजमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महतोले ओली हिटलरको शैलीमा निरंकुश चरित्र देखाएकाले पतन निश्चित भएको बताउनुभएको हो ।
१०. बाग्मती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चालनमा रहेको हेटौँडाबाट भीमफेदी–देउराली हुँदै–कुलेखानी सडकखण्डअन्तर्गतको निर्माणाधीन आयोजना क्षेत्रमा यही माघ १० गतेदेखि सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाइने निर्णय भएको छ ।
११.प्रेमिकाको गोलि हानी हत्या गरेर फरार भएका अभियुक्त १० वर्षपछि पक्राउ परेका छन् । पाँचथरमा प्रेमिकालाई गोली हानेर हत्या गरेर भागेका ताप्लेजुङ छाँगे–१ घर भएका कुमुकहाङ लिम्बु आङबुहाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट खटिएको बिशेष टोलीले मुलपानीबाट विहीवार राति उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
१२.नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । हिजो प्रतितोला ९३ हजार १०० रुपैंयामा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज २०० रुपैयाले घटेर प्रतितोला ९२ हजार ९०० रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । तेजावी सुनको मूल्य भने आज ९२ हजार ४०० रुपैंया कायम भएको छ ।
१३.पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अमुक शक्तिको सेटिङमा संसद विघटन भएको बताउनुभएको छ । संवैधानिक निकाय, सुरक्षा लगायत राज्यका सबै अंग नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा संसद विघटन गरेको भट्टराईको दाबी छ ।
१४.भारत्तोलनका वरिष्ठ खेलाडी रुप कार्कीको निधन भएको छ । अमेरकामा बस्दै आएका कार्की खेल प्रशिक्षणको शिलशिलामा नेपालमा थिए । उनको हृदयघातका कारण बुटवलमा निधन भएको हो । हृदयघात भएपछि उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउदै गर्दा बाटोमै उनको निधन भएको हो । तीनमहिना अगाडि फर्किएका भारत्तोलक विश्व च्याम्पियन रुप कार्की ५२ बर्षका थिए । कार्की गत अक्टोबरमा आफूले प्राप्त गरेको शीप अनुभव लिदै मातृभूमिलाई योगदान गर्ने दृढ संकल्प सहित नेपाल गएका थिए ।
१५.विगतका वर्षहरु झैँ यस वर्ष पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सप्ताहव्यापी रूपमा शहीद दिवस मनाउने भएको छ । महानगरपालिकाले भोलि (माघ १०) देखि १६ गतेसम्मका लागि सप्ताहव्यापी शहीद दिवस मनाउन कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको छ ।
१६.संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ शुरु हुने वित्तिकै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल अधिवक्ता उभिएर बहस गर्ने ठाउँ (पोडियम) को दायाँपट्टि बसेर बहस सुनिरहने गर्नुहुन्थ्यो । तर बिहीवारको चिया ब्रेकपछि पुन: शुरु भएको बहसमा भने खरेल त्यहाँ देखिनुभएन । चिया ब्रेकपछिको सुनुवाइमा उहाँ एकाएक हराउनुभयो ।
१७. कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक तबरबाट लगेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस’ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेर ‘हिजो राजाहरूले राखेको मर्यादा पनि कुल्चिएको’ आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिनुलाई ‘संविधानको घोर उल्लंघन’ भन्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दा कानुन व्यवसायीले यसरी आक्रोश पोखेका हुन्।
१८.अमेरिकाकी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले चर्चित फेशन डिजाइनर प्रबल गुरुङले बनाएको पोशाक लगाएर भर्चुएल प्रार्थना सेवामा सहभागि बनिन् । बिहीबार बिहान नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन भएपछि आयोजित भर्चुएल प्रार्थना सेवामा ह्यारिसले गुरुङले बनाएको पोशाक लगाएर भाग लिएकी हुन्।
१९.शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी अस्वस्थ हुनुभएको छ । १०१ वर्षीय जोशीको किस्ट अस्पतालमा उपचार भइरहको साहित्यकार नेरेन्द्रराज प्रसाईले बताउनुभएको छ । साहित्यकार प्रसाईका अनुसार उहाँ अस्वस्थ हुनुभएको खबर थाहा पाएपछि ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनसहित उहाँ जोशी निवास नइ शताब्दी घर पुग्नुभएको थियो ।
२०. १५ वर्षीया बालिका कक्षा ७ पढ्दापढ्दै बेहोस हुने रोग लागेपछि विद्यालय जान छाेडिन् । उनका बुबाले पनि केही वर्षदेखि मानसिक रोगको औषधी सेवन गर्दै आएका छन् । आमा मेलापात जाँदा ती बालिका साइनोले मामा पर्ने आफन्तको रेखदेखमा छाेडेर जान्थिन् । बेहोस हुने रोग लागेकी ती बालिकालाई रेखदेखमा छाेडेको ठाउँमा बेहोस भएका बेलामा बलात्कारको शिकार बनिन् र गर्भवती भईन् ।
२१.प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले गरेकाे विरोध प्रदर्शनमा मानवसागर उत्रिएकाे छ। राजधानीमा शुक्रवार भइरहेकाे विराेध प्रदर्शनमा देशभरबाट हजाराैं कार्यकर्ताहरु सहभागी छन् ।
२२.भिजन एक्सलेन्स अवार्डबाट प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत लगायतका दुई विशेषज्ञलाई सम्मान गरिएको छ । आँखा स्वास्थ्य सेवाका लागि वकालत गरेको तथा यसको कार्यान्वयन र संस्थागत संरचनाकाे विकास गरी अन्धोपन नियन्त्रण कार्यमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको कारण भिजन एक्सलेन्स अवार्डबाट विशेषज्ञहरुलाई सम्मान गरिएको हो ।
२३.नेपालमा थप तीन सय दुई जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार पाँच सय ४५ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा तीन सय दुई जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।
२४.कोटगाउँमा राष्ट्रिय दलित संग्रहालय निर्माणका लागि आवश्यक भवनको शिलान्यास गरिएको छ । संग्रहालयको शुक्रबार पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गर्नुभयाे । दलित समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न चिज बस्तुहरु राख्ने गरी संग्रहालय निर्माण गर्न लागिएको बताइएको छ ।
२५.अष्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिग बीबीएल टी–ट्वान्टी क्रिकेटमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्द होबार्ट हुरिकेन्स पराजित भएको छ । मेलबर्नमा आज भएको खेलमा होबार्ट पर्थ स्कर्चर्ससँग २२ रनले पराजित भएको हो । पर्थले दिएको १ सय ८० रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको होबार्टले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ५७ रन मात्र बनाउन सक्यो । होबार्टका लागि डीआर्ची शर्टले सर्वाधिक ४३ रन बनाए ।
२६.सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुन आयातमा लागू हुँदै आएको कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छासँग आज भएको छलफलमा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले कोटा प्रणाली खारेजीका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
२७.पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति गठन आदेश मस्यौदा गरी पठाएको एक दशकपछि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस २० गतेको बैठकले समितिको गठन आदेश पारित गरेको मन्त्रालयका संस्कृति शाखाप्रमुख दुर्गाप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभएकाे हाे ।
२८.प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ आइतबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएकोे छ । सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहस पूरा नभएपछि पर्सी आइतबार लागि ’हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको हो । आज बहस हुनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बहस गर्ने वकिलहरु धेरै भएकाले छोटो बहस गर्न आग्रह गर्नु भएको थियो ।
२९.पृथु बास्कोटाको अर्धसतकको मद्दतमा बागमती प्रदेशले प्रदेश–२ माथि ६ विकेट जित निकाल्दै जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ । मूलपानीको मैदानमा प्रदेश–२ ले ४८.२ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दिएको १ सय ८० रनको लक्ष्य बागमती प्रदेशले ४८.२ ओभरमा ४ विकेट गुमाएर भेटाउन सफल भयो ।
३०.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहको आज भएको बृहत शक्ति प्रदर्शनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यक्रम ओझेलमा परेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा दाहाल–नेपाल समूहले आज राजधानीमा गरेको प्रदर्शनले ओली निकट पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीद्वारा आयोजित कार्यकर्ता भेला ओझेलमा परेको हो ।
३१. ग्लोबल आइएमई बैंकले क्यूआर कोडमार्फत नगद भुक्तानी कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको छ । बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ललितपुर जिल्लाको नख्खु बजार क्षेत्रमा क्यूआर कोडमार्फत नगदरहित भुक्तानी प्रवर्द्धन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।